किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं ! – Yuwa Aawaj
किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं !
चैत्र २४, २०७७ मंगलबार 6606
किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्या’नै गु’माउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ कि’ड्नी भनेको के हो ?
मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ र कि’ड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? लगायतका कुराहरु जान्नको लागि पढ्नुहोस कि’ड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु ।
किड्नीले शरीरमा रस एवं रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम किड्नीले गर्दछ । प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ कि’ड्नीसँग दिनहुँ ६० किलो जति पानी छान्ने क्षमता हुन्छ ।
फेरि पनि सामान्य रुपमा किड्नीले २४ घण्टामा एकदेखि दुई लिटर पिशाब बनाएर शरीरलाई निरो’ग राख्दछ ।मु’टुद्वारा पम्प गरिएको रगतको २० प्रतिशत कि’ड्नीमा जान्छ, जहाँ यो रगत सफा भई पुनः शरीरमा जाँदछ ।
यसरी किड्नीले हाम्रो रग’त सफा गर्दछ र सबै टाँक्सि’न्स पि’साबबाट शरीरको बाहिर निस्कन्छ । किड्नी हाम्रो शरीरको सन्तुलनकारी अंग हो । यसको मतलब यदि शरीरमा कुनै चिज बढी या कम हुन्छ भने किड्नीले त्यसलाई सम्हाल्दछ ।
किड्नीको विशेष सम्बन्ध मुटु, फे’क्सो र कलेजो सँग हुन्छ । मुख्य गरी मुटु र किड्नीले परस्पर सहयोगको साथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसकारण, यदि कसैलाई मुटु रो’ग लागेको छ भने उसको किड्नी पनि विग्रन्छ । त्यसबेला त्यो व्यक्तिको रक्त’चाप उच्च हुन्छ र क्रमशः मुटु पनि दुर्बल भएर जान्छ । किडनीका रोगीहरु दिनानुदिन बढीरहेका छन् ।
किड्नी फेलहुनाका मुख्य कारणहरुमा मुटु, दम, श्वास, टि.बी., सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरुको निदानका लागि भनेर आधुनिक औष’धीहरुको बढी सेवन गर्नु हो । यी आधुनिक औषधीहरुको अल्प’कालीन सेवनको विना’शकारी प्रतिक्रियाको रुपमा पनि कि’ड्नी फेल जस्तो गम्भीर रो’ग हुने गरेको देखिन्छ । यी आधुनिक औषधीहरुको विषाक्त प्रभावका कारण नै किड्नी तथा पि’शाबसम्बन्धी रो’ग उत्पन्न हुन्छ ।
किड्नी खराब हुनुको मुख्य लक्षण सुन्निनु हो । शरीरमा पानीको मात्रा बढी भयो भने सुन्निने समस्या हुन्छ भने नूनको मात्रा बढी भयो भने उच्च रक्त चाप हुन्छ । यसबाहेक रगत बनाउनु, ह’ड्डिहरुलाई मजबु’त पार्नु अर्थात् भिटामिन ‘डी’ बनाउनु, उच्च’रक्तचाप नि’यन्त्रण गर्नु र शरीरमा उत्पन्न भएका ख’राब पदार्थलाई शरीरबाहिर निकाल्ने काम गर्दछ । किड्नीका कैयौं समस्याहरु हुन्छन्, जसलाई जान्न आवश्यक छ ।
६.नेफ्रो’टिक सि’न्ड्रोम र यसको लक्षणहरु के के हुन ?
किड्नीमा फिल्टर अर्थात् स–साना छिद्र हुन्छ, जसले खराब तत्वलाई शरीर बाहिर निकाल्ने र राम्रो तत्वलाई शरीरका लागि लाग्दछ । नेफ्रो’टिक सि’न्ड्रोममा किड्नीमा जुन फिल्टर हुन्छ, त्यसका छिद्रहरु ठूलो भएर जान्छ र ती छिद्रबाट शरीरका लागि उपयोगी तत्व पनि ख’राब तत्वका साथमा बाहिर निस्कन्छ ।
परिणामतः विहान अनुहार सुन्निने तथा बेलुका खुट्टा खासगरी पैताला सुन्निने गर्दछ । यो किड्नी वि’रामीको सुरुको लक्षण हो । उपचार यसको उपचारका लागि बायोप्सी नामको क्रिया गरिन्छ, जसको माध्यमद्वारा पत्ता लाग्दछ कि न्यू’ट्रोटिक सि’न्ड्रोम कुन अवस्थामा छ भन्ने । सही तरिकाबाट उपचार गर्नाले विरामी निको हुन्छ ।
तर सुन्निने समस्याप्रति ध्यान दिएन र समयमै उपचार गरेन भने विस्तारै विस्तारै किड्नी फेल हुन पुग्दछ । सावधानी जब सुन्निने समस्या देखापर्दछ, तुरुन्तै किड्नी विशेषज्ञको सम्पर्कमा जानुपर्दछ । खानामा नून कम गर्ने र पिउने चिजमा पानीको मात्रा एकदेखि डेढ लिटर मात्र पिउनु पर्छ । यो भनिन्छ कि पानी धेरै पिउनाले किड्नी ठीक रहन्छ, यो भनाइ सही होइन ।
किड्नीको पत्थरी हुँदा धेरै पानी खानु ठीक हो तर अन्य वि’रामी भएको हकमा धेरै पानी पिउनाले किड्नीलाई नो’क्सान पु¥याउन सक्दछ । समयमै उपचार गर्दा यस्तो रोग लागेका विरामी ९० प्रतिशत ठिक हुन्छन् ।
७.किड्नी स्टोन (प’त्थरी) , यसको लक्षण र उप’चार
किड्नी स्टोन तथा पत्थरी आमरुपमा देखापर्ने समस्या हो । यो कि’ड्नीसम्बन्धी दोस्रो मुख्य समस्या हो । बिरामीको पिशाबमा केही तत्व तथा रसायनको मात्रा बढी हुन्छ । जुन तत्व पिशाबसँग घोलिदैन, जुन जमेर स्टोन अ’र्थात् पत्थर बन्न जान्छ ।
क्या’ल्सियम, फा’स्फोरस, यू’रिक ए’सिड, सिस्टी’न र कैयौं अन्य तत्वले स्टोन बनाउँदछ ।जब पत्थर बन्छ, त्यो क्रमशः ठूलो हुँदै जान्छ र यसले पि’शाबको बाटो बन्द गरिदिन्छ । यसबाट कि’ड्नीको सं’क्रमण तथा फेल हुने जोखि’म बढेर जान्छ । कि’ड्नी पत्थ’रीको लक्षण भनेको पि’शाब रोकिनु, असह्य दुखाइ, पिशा’बमा रगत आउनु, पिशाब पोल्नु, संक्र’मण हुनु तथा दुखाइको क्रममा उल्टी समेत हुनु हो ।
उपचार यदि पत्थर ६ मि.मि.भन्दा सानो छ भने त्यो पि’शाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि अपरेशनको आवश्यकता पर्दैन । दुखाई धेरै भयो र धेरै रगत आइरहेको छ भने चाहिं अपरे’शनको जरुरत पर्दछ । १० मि.मि.भन्दा बढी मात्राको पत्थरी कहिल्यै पनि पिशाबबाट निस्कन नसक्ने हुँदा त्यसको अप’रेशन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प हुँदैन ।
सावधानी स्टोन नबनोस् भन्नका लागि दिनमा तीनदेखि चार लिटर पानी अनिवार्य पिउनु पर्दछ । पानीको कमी भयो भने के’मिकल कन्स’न्ट्रेशन बढ्दछ भने पानी बढी भयो भने कन्सन्ट्रेशन कम हुन्छ । पेशाब आउँदा रोक्नु हुन्न । पिशाब रोक्दा के’मिकल कन्स’न्ट्रेशन बढ्छ । किडनीको कुनै विरामी वा संक्रमण छ भने तुरुन्तै उपचार गराउनु पर्दछ ।
बमचभलब नबिलम कि’ड्नीको सबै रोगहरु स्थायी हुँदैन । सही उपचारबाट खरा’ब किड्नी ठीक हुन सक्छ । किड्नी फेल भनेको किड्नीले आफ्नो काम नगर्नु हो । अर्थात् शरीरमा सन्तुलन कायम नहुनु हो । यसो हुँदा शरीर सुन्निन्छ तथा ब्ल’डप्रेशर बढ्छ । के’मिकल्स, जस्तो यू’रिया, क्रि’एटिना’इन, पोटे’शियम बढ्न थाल्दछ ।
त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ कि कि’ड्नीले काम गरिरहेको छैन । यसबाट यो पनि चल्दछ कि कि’ड्नी कति खराब भएको छ भनेर । आजकाल कि’ड्नी पेलको मुख्य कारण ब्ल’ड प्रे’सर, सुगर, पत्थ’री तथा धेरै पेन किलर प्रयोग गर्नाले हुने गरेको छ । तसर्थ यसबाट बच्न जरुरी छ ताकि ग’म्भीर स्थिति आउनबाट बच्न सकियोस् ।
Prevमदन कृष्ण श्रेष्ठले यस्तो भनेपछी समाल्न सकिनन् आफुलाई अंगालो हालेर यसरी रो’ईन्- वियोन्स ।(भिडियो सहित)
Nextब्लड प्रेसर लो छ ? त्यसो भए यी चीज खानुहोस् !
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रियंकाको सुझाव – भोट पाउनेलायक काम गरेर त देखाउनुहोस पहिले ।
किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं ! (6606)